Ɔde Kɔmaa Romafo 14:1-23
Mummmu mo ho atɛn (1-12)
Monnto obiara hintidua (13-18)
Munni asomdwoe ne baakoyɛ akyi (19-23)
14 Onipa a ne gyidi yɛ mmerɛw no, munnye no ntom.+ Na wɔn a mo ne wɔn adwene nhyia* no, ɛnsɛ sɛ mubu wɔn atɛn. 2 Obi wɔ gyidi a ɛma odi biribiara, nanso onipa a ɔyɛ mmerɛw no de, odi nhabamma* nko ara. 3 Onipa a odi aduan biara no, ɛnsɛ sɛ obu nea onni nnuan bi no animtiaa.+ Na onipa a onni nnuan bi no, ɛnsɛ sɛ obu onipa a odi aduan biara no animtiaa, efisɛ Onyankopɔn agye no atom. 4 Wo ne hena a wubu obi somfo atɛn?+ Sɛ obegyina oo, ɔbɛhwe ase oo, ɔno ara ne wura na ɔbɛkyerɛ.+ Nokwasɛm ne sɛ, obegyina, efisɛ Yehowa* betumi ama wagyina. 5 Obi bu da bi sɛ ɛho hia sen nna a aka no;+ ɔfoforo nso bu nna nyinaa pɛ.+ Momma obiara adwene nsi no pi. 6 Nea obu da bi sɛ ɛho hia no, ɔyɛ ma Yehowa.* Bio nso, nea odi biribi no, odi ma Yehowa,* efisɛ ɔde aseda ma Onyankopɔn.+ Na nea onni no, Yehowa* nti na onni; ne nyinaa mu no, ɔda Onyankopɔn ase.+ 7 Nea ɛwom ne sɛ, yɛn mu biara nte ase mma ne nko ara ho,+ na obiara nso nwu mma ne nko ara ho. 8 Na sɛ yɛte ase a, yɛte ase ma Yehowa,*+ na sɛ yewu nso a, yewu ma Yehowa.* Enti sɛ yɛte ase oo, sɛ yewu oo, yɛyɛ Yehowa* dea.+ 9 Nea enti a Kristo wui na ɔbaa nkwa mu bio ni: Sɛ́ ɔbɛyɛ awufo ne ateasefo nyinaa Wura.+ 10 Adɛn nti na wubu wo nua atɛn?+ Na adɛn nti na wo nso wubu wo nua animtiaa? Efisɛ yɛn nyinaa begyina Onyankopɔn atemmu agua no anim.+ 11 Na wɔakyerɛw sɛ: “‘Sɛ́ mete ase yi,+ me na nkotodwe nyinaa bɛkotow me, na tɛkrɛma nyinaa bɛpae mu akamfo Onyankopɔn,’ Yehowa* asɛm ni.”+ 12 Ɛno nti, yɛn mu biara bebu ɔno ara n’akontaa akyerɛ Onyankopɔn.+ 13 Enti mommma yemmmubu yɛn ho atɛn bio,+ na mmom munsi mo bo sɛ moremfa hintidua anaa akwanside nto onua biara anim.+ 14 Minim, na migye di Awurade Yesu mu sɛ, biribiara nni hɔ a ɛno ara de, ɛho ntew.+ Sɛ obi bu biribi sɛ ɛho ntew a, na ɛho ntew mma no. 15 Na sɛ aduan nti wo nua reteetee a, ɛnde na wonnam ɔdɔ kwan so bio.+ Mfa w’aduan nsɛe obi a Kristo awu ama no.+ 16 Enti mommma wɔnnka papa a moyɛ no ho nsɛmmɔne. 17 Efisɛ Onyankopɔn Ahenni nyɛ adidi ne ɔnom,+ na mmom ɛyɛ trenee ne asomdwoe ne anigye a ɛnam honhom kronkron so. 18 Na obiara a ɔsom* Kristo wɔ saa kwan yi so no, ɔsɔ Onyankopɔn ani, na nnipa nso gye no tom. 19 Ɛno nti, nneɛma a ɛde asomdwoe ba+ ne nneɛma a ɛma yɛhyehyɛ yɛn ho den+ no, momma yenni ɛno akyi. 20 Munnyae sɛ aduan nti mosɛe Onyankopɔn adwuma.+ Ɛwom, ade nyinaa ho tew, nanso ɛyɛ bɔne sɛ obi bedi biribi bere a ɛbɛto obi hintidua.+ 21 Ɛyɛ papa sɛ worenwe nam anaa worennom nsã* anaa worenyɛ biribiara a ɛbɛto wo nua hintidua.+ 22 Gyidi a wowɔ no, ma ɛnyɛ wo ne Onyankopɔn ntam asɛm.* Anigye ne onipa a ommu ne ho atɛn wɔ nea wasi gyinae sɛ ɔbɛyɛ ho. 23 Na sɛ n’adwenem yɛ no naa, na odi a, wadi fɔ dedaw, efisɛ ɛnyɛ gyidi na ɔde di. Nokwarem no, biribiara a ennyina gyidi so no yɛ bɔne.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn a wɔn adwenem yɛ wɔn naa.”
^ Anaa “ɔyɛ akoa ma.”
^ Anaa “ma ɛnhyɛ w’ankasa mu wɔ Onyankopɔn anim.”